မန္တလာ ပြခန်း ( 3in1 photography) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန္တလာ ပြခန်း ( 3in1 photography)
မန္တလာ ပြခန်း ( 3in1 photography)
၁၈ ရက်နေ့ မန်းလေးသွားမဲ့ ကိစ္စပျက်ပြီး ၁၉ ရက်နေ့မှ သွားဖြစ်ပြီးသကာလ ဥပေါက်ရှိရာမန်းလေးမှာ ဥပေါက်နဲ့တူတူ လမ်းသလားကြရင်း မဲမဲမြင်ရာ ဆော်ကြပြီးတဲ့ နောက်..၂ ယောက်ထဲပြရမှာ ထက် ပိုမိုစုံလင်စေရန် ကလုလင် ပါ ပါဝင်အားဖြည့်ပြီး 3in1 photography ပြခန်းလေး ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ ဂျောင်း…..
၁ ။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေး (photo by ဥပေါက်)
၂။ ရေချိုးဆိပ် (photo by ဥပေါက်)
၃။ တောင်ပြာတန်း (photo by ဥပေါက်)
၄ ။ မိုးတိမ်တွေထဲ (photo by ဥပေါက်)
ထို့ကြောင့် ဤလူကြီးကို ဥပေါက်ဟုခေါ်သည်
၁။ ဘီးကလေးကိုစီး (photo by ဂန္ဓာရီ)
၂။ နွား ကြန်ဆုံ (photo by ဂန္ဓာရီ)
၃။ စစ်ကိုင်တောင်ရိုး နဲ့ ဧရာ(photo by ဂန္ဓာရီ)
၄။ မယ်မယ်နု အုတ်ကျောင်း- မလုပ်ရရင်မနေနိုင်လို့ ဆော့လိုက်တဲ့ HDR (photo by ဂန္ဓာရီ)
၁။ ဦးပိန်နဲ့ မင်းသား (Photo by Mလုလင်)
၂ ။လက်ပံ(Photo by Mလုလင်)
၃။ မေမေရဲ့သား (Photo by Mလုလင်)
ရေ ရေ လည် လည် မိုက်တယ် ဗျာ
ကိုလုင်တို့ ဆြာအုပ်တို့လက်ရာတော့ ဆိုဖွယ်မရှိပြီ..
“ထို့ကြောင့် ဤလူကြီးကို ဥပေါက်ဟုခေါ်သည် ” ဆိုတဲ့ပုံမှာ ဥပေါက်အရိုက်အနှက်ခံရခြင်းပေါ့
နံပတ် ၄ မှာ အသက်ရှုရပ်သွားလို့။
ဘယ်လိုပြောရလဲ ဘယ်လိုပြောရမလဲ …. (ဝတ်မှုန်ရွှေရည်လေသံဖြင့်ဖတ်ပါ)
ဆြာအုပ် ရဲ့မယ်နု အုတ်ကျောင်း…
Mလုလင် ရဲ့ မေမေရဲ့သား…
ပွဲလာပါဆိုတော့ မလာကြပဲနဲ. ချိန်းပွဲ သွားရိုက်ကြတာ မုန်းထာအေ…
ဟိုတရပ်ထဲသား လူဆိုး ရယ်..
မြက်ပင်တွေကြား ရူးရူးထိုင်ဖလားဝါးနေတဲ့ ဥလေးကြီးရယ်..
အော်မေ့လို. စိတ်ဆိုးဒယ်.. ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေ အကုန် ကူးသွားတယ်..
သုံးယောက်လုံးမိုက်လား……….မိုက်ရင် ဘီယာတိုက် ဒါဘဲ……….
ဥပေါက်ရဲ့ ၁/၂ ။။ စာအုတ် ရဲ့ ၁/၄ ။ ကိုလု ရဲ့ ၃ ။။ ရေလည် ကြိုက်ဒလယ်။
(20-7-2013)စာအုပ်လာရင် မနက်စောစောအာရုံတက်မှာ တောင်သမန်ကိုသွားနှက်မယ်ဆိုတော့
မှောင်တောင်မဲတဲ တောင်သမန်ကို သွားလက်အဆော့ မိုးတိမ်တွေညို့နေလို့နေမထွက်တော့စိတ်ပျက်။
ပြန်လာတော့ အသိကယ်ရီနဲ့အပ်ပြီး ထည့်လို်က်တော့ ကုသိုလ်တော်ဘက် ရောက်သွားပါသတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ရွှေကြက်ကျဘုရားပေါ်တက်ပြီးစစ်ကိုင်းတံတားကို အမိဖမ်း။
နောက်ရက်(21-7-2013) ကျနော်မအားတော့ တစ်ယောက်ထဲလွှတ်ပြီးရိုက်ခိုင်းရပါတယ်။
သူလဲသူ့မိတ်ဆွေခေါ်ပြီးမင်းကွန်း စစ်ကိုင်း ကောင်းမူ့တော် အင်းဝ တစ်ရက်ထဲသွားခဲ့ပါသတဲ့။
ကျနော်မပါတဲ့ အဲဒီနေ့က တိမ်တွေလွှတ်လှဆိုဘဲ။
(22-7-2013)ဝါဆိုလပြည့်မနက် ကျနော်က မဒမ်ပေါက်ကို လိုက်ပို့။
ဖြစ်ချင်တော့ မန်းလေးတောင်ပေါ်ရောက်အသွား သူကတော့ ကုသိုလ်တော်ထဲမှာ။
နောက်တော့ ဝိုင်ကေကေဝိုမှာ ကြေးအိုးသောက်ရင်း ဘီယာစား။
(အဲဒီမှာ တစ်ခါ လုပ်ကြံတာ ခံရတာ ပုံပါလာမှဘဲသိတော့)
အဲဒီကမှာ အိုးဘိုရွှေကျင်ကနေ ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်လို့ရေဝင်နေတဲ့ ညောင်ကွဲကနေစပြီး သွား.
ဖောင်တွေပေါ်တက်ရို်က်ပေမယ့် နေရောင်မလှတော့ ပုံမရ.။
ပုံတွေတင်မယ်လုပ်တော့ လိုက်ချင်ပါရဲ့နဲ့ကျန်နေတဲ့ ကလု ကိုခေါ်ပြီး3in 1 လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပထမလ ကလု တင်ပါတယ်။.
နောက်လ3in 1 ဘယ်မှာရိုက်ဖြစ်မယ်မသိပေမယ့် ကျနော်တင်မယ်လို့ တွေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့က တစ်လ တစ်ခါ3-4 ine 1ကြမယ်လို့တိုင်ပင်ထားပါတယ်။
အော် လေးပေါက် ဘယ်သူ့ကို ချောင်းတယ်မသိ
စနိုက်ပါနဲ့ အသံတိတ် လုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်.. ဟွင့် ဟွင့်
ရက်ရက်စက် လုပ်ကြံသွားတာဗျာ နောက်တစ်ပုံကျန်သေးတယ်
လှလိုက်ချက်။ လိုချင်လို့ယူသွားလို့ရမလား။ Background photo တင်ချင်လို့ပါ။
ပုံတွေ လန်းဒဂျာ ..
ဒါ့ထက် ဥပေါက် ဆိုဒဲ့လူဂျီး
အဲ့ဒီမှာ ချောင်းပီးရင် …
ဒီလို လာဘာအုံးလို့ …
အံဇာတုန်း မာလကာေဆောင်ရင် ရွာဓါတ်ပုံဆရာများအဖွဲ့မှာ
အစ အဆုံး မှတ်တမ်းတင်ပေးပါမည်။
ဒီတစ်ခါ ဆြာအုပ် ရေစာလျှော့ထားပါလား
နံပါတ် ၅ ပုံ
ကပေါက်ကြီး သွားသွား ထိုင်လွန်းတဲ့ နေရာလေး ထင်ရဲ့။
ပုံတွေ အားလုံး လှပါ့ စာအုပ် ရေ။
ကိုလတ်ကြီးရေ အဲဒီနားတွေက ကျနော်အမြဲသွားနေကြနေရာတွေပါ။
အဲဒီအချိန် က နေကျဲကျဲတောက်ပူနေတဲ့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲ သုံးနာရီလောက်။
ပုံလှတာ လိုချင်လို့ နေပူထဲစောင့်ရိုက်ခါက ရှူရူဖလားဝါးပုံဖြစ်သွားရတယ်လို့
စာအုပ်တော့ သိမယ် ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်ရောက်ရင်
“ထို့ကြောင့် ဤလူကြီးကို ဥပေါက်ဟုခေါ်သည် ”
KZ : HDR လုပ်ထားလို့ပါဂျာ..အသက်ရှုတော့မရပ်ပါနဲ့ဗျာ.. ကျုပ် တရားခံဖြစ်နေပါဦးမယ်..
ရွှေတိုက်စိုး : တိုက်တိုက်ရေ ဝါတွင်းဂျီးဗျာ.. ခင်ညား တော်တော်ဆိုးတဲ့သူပဲ.. ဘယ်နေ့လဲ ပြော
ကိုပေါက်(မန္တလေး) : အံဇာတုန်း မာလကာေဆောင်ရင် ဟုတ်လား.. ဟီဟိ ကျနော်က ညဖက်တာဝန်ယူမယ် ခွိခွိ
Mr. MarGa : ဟုတ်လား.. နောက်တခါပြန်တင်လိုက်မယ် ဟီး
အရီးခင်လတ် : ထိုင်ရုံနဲ့မပါးနိုင်ဘူးဂျ.. ရှူရှူး ကြောင့်ဖြစ်မယ်
စကားမစပ် ညဖက် တာဝန်ယူရင် အကူလိုဦးမလား ဟင်
စာအုပ် မင်းငါ့နောက်ကနေလမ်းလျောက်နေတဲ့အကြံကို ခုမှရိပ်မိတော့တယ်
ကိုလုလင်ရိုက်တဲ့ နောက်ဆုံး တစ်ပုံ ရင်ထဲထိတယ်.. မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်…
ကိုရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံလေးနဲ့ တူလို့…
အဲ့ဒီ့ မေမေရဲ့သား ပုံ ကဒီလိုဗျို့……… ကျွန်တော် မန်းလေး ရောက်တော့ ကို ရွှေမင်းသား နဲ့ ဓာတ်ပုံ သွားရိုက်မယ် ဆိုပြီး ဆရာ ဦး ဖရန်ကီ ထွန်းတင် နဲ့ ကျွန်တော် တို့ သုံးယောက် ရှမ်းလေးကျွန်းဘက် သွားတာ . . ကျွန်တော့မှာ ဘာရိုက် ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ . . ဆရာက . . ဒီလို ယူ ကွ . . . ဒီလို ကွ . . ဆိုပြီး ပြ ပေးလို့ အဲ့ဒီ့ ပုံ ဖြစ်လာတာ ပါဗျာ . . . အဲ့ဒီ့မှာ အတွေ့အကြုံ နဲ့ အာရုံ ဝင်စားနိုင်မှု အနုပညာ ဆိုတာ ဒါပါလား လို့ သိခဲ့ရတာ ဗျို့. . . .။
ကျူပ်ကတော့ လှအောင်ရိုက်တတ်ရုံပဲရှိသေးတော့ ရှက်မိပါတယ်ဗျာ
coming Sunday ကို ပဲခူး တဲ့နော် . . ဘယ်လို လဲ ???
လှ ဒယ် ။
ဒီတစ်ခါ သင်္ဘောက ဆင်းရင်တော့ ၊
ဩဇီမှာ နားတုန်း ဓါတ်ပုံ ပညာကို လေ့လာဦးမှပဲ ။
လှရက်လိုက်တာ အံ့ဘနန်းပါပဲ။ မျက်စီထဲမှာ မယ်မယ်နုအုတ်ကျောင်းနဲ့ လက်ပံ စွဲသွားတယ်။